Ngaba uyayazi into edibanisa i-SEO yasekuqaleni kunye nokusebenza komxholo wevidiyo?
Umxholo wevidiyo uba ngokuyimfuneko ngakumbi, ngokubhekiselele kwiqhinga lokuthengisa ngokuthe ngqo kwi-intanethi. Phakathi kweendawo ezinamandla kunamavidiyo afundisayo afakwe kwiphepha ngalinye lewebhu, ndibona kuqala inzuzo enjalo, njengokuqhubela phambili ukuqhubela phambili, ukwakha igunya elithembekileyo lamagama egqithisi kunye nokuqwashiswa kwamakhasimende angcono, kwaye ekugqibeleni inzuzo enkulu yokwenza imali kwi-intanethi yenza konke.
Ngokuqhelekileyo, isiqulatho sevidiyo sinxulumene ngandlel '. Kodwa yiphutha elikhulu ukukholelwa oko - long term care insurance cost california. Ewe, inyaniso, i-Twitter, i-Facebook, kunye ne-YouTube ngokwayo zizinto ezilungileyo kakhulu zokubeka iividiyo zakho zokubambisa amehlo. Zonke ezi ziqulatho ziyasetyenziswa-zibonakaliswe kwaye zifanelekile ukwenza okufanayo. Kodwa apha kuza umbuzo ogqithisileyo - kuthekani ukuba kukho intsebenziswano embi phakathi kwe-SEO kunye nomxholo wevidiyo? Njengoko namhlanje ukukhangela ukucwangcisa kufaka imiba emininzi ngaphaya komxholo. Enyanisweni, ukusuka kwimbono yeenjini zokukhangela, ukuba nomxholo wevidiyo olungiswe kakuhle unokuba nomxholo wemgangathweni, kodwa ngendlela yakhe. Ngezantsi ziza kuqwalaselwa ngokufutshane -kuba ingaba i-SEO kunye nomxholo wevidiyo kufuneka zifike ngesandla-nto ukuze zivelise ezinye izithuthi zendalo zihlala ziba zikhokelo ezifanelekileyo? Okanye awukho nto kuwo? Ewe, ndihleka apha. Ke mna, imfuneko ebalulekileyo yokuba ndibe ngumgangatho osebenzayo kwi-SEO kunye nomxholo wevidiyo odibeneyo ngokubambisana sele sele ibe yimeko engafanelekanga kwimicimbi. Ndiya kuqinisekisa ukuba ndichanekile ngoku. Ngezantsi ndiza kukubonisa iingcebiso ezikholisayo zokuba nokuphuculwa kwevidiyo encinci kunye nokusebenza kakuhle kwoshishini lakho kwi-intanethi.
Ngaphambi kokuba siqale, masiqonde isiluleko esisodwa esilula - i-webpage ye-SEO kunye nokulungiswa komxholo wevidiyo kuyafana, kodwa akukafaneli. Njengomxholo wasezulwini ngokubhaliweyo, iividiyo zibekwe nguGoogle ziqwalasela umxholo wemigangatho kunye nenani le-backlink ezinamandla. Makhe sibone ezinye zam namava amandulo ukuze sisebenzise kakuhle indlela yabo efanayo.
Okokuqala, masiqhube ngokubhaliweyo kwevidiyo. Ukuba nomxholo wevidiyo obhaliweyo kumaphepha akho ewebhu kuya kuba mnandi kubo bonke: abasebenzisi bokwenene banandipha idatha efanelekileyo kwaye ibandakanyekayo yokuguqulwa okuphezulu, ngelixa iinjine zokukhangela zinokukunikwa ngokubhekiselele kumgangatho we-SERPs. Xa senza ngale ndlela, simele senze konke okusemandleni ethu ukunceda abaqhubi "bafunde" umxholo wevidiyo ngendlela efana nokuba kwakungumxholo oqhelekileyo wokubhala. Uzakufuna ukubhalwa kwegama elipheleleyo, kunye neengcamango ezibonakalayo kuzo zonke ividiyo oza kuzibamba. Ukuze ndiyenze oko, ndincoma ukusebenzisa amava afanelekileyo kule ntsimi eyenziwe nguMo (nje jonga amavidiyo abo amnandi kwi-Whiteboard ngoLwesihlanu). Unokuphinda ukhangele iipodcasts ezifanelekileyo kakuhle ezikwiikhompyutha zenye kwaye zifumaneka kwi-Intanethi.
Ekugqibeleni, masihlahlele ukulungiswa kwemethadatha yevidiyo. Njengoko ndithe ndathetha, ngokukodwa le ngongoma ye-SEO jikelele kunye nokusebenza kwe-video ukusebenza ngokufana kakhulu. Yenza i-video yakho inkcazo, kunye nesihloko ngasinye:
ngaphezulu kokunyanzelisa kunye nokwamkela ukugqithisa ngokugqithiseleyo
ngokufanelekileyo kunye nemvelo kwiphepha lakho lewebhu
. ) ezifakwe ngamagama asemgangathweni kuphela afanelekileyo kwintengiso yakho yeemarike okanye ezijoliswe ngabaphulaphuli
iimeta eziza kufika kwii-155 ezinobunzima
izihloko ezithatha amehlo ezimi ngaphantsi kweelwimi ezingama-55